ရှိုဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
(၅၀,၀၀၀ ရည်ညွှန်း ၁၉၈၃–၂၀၁၁)
cnb – ချင်းပုံချင်း
csh – အရှိုချင်း
cbl – ဘွာလ်ခွာချင်း
ရှိုဘာသာစကား (အင်္ဂလိပ်: Shö language) သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့တွင် ပြောဆိုကြသော ကူကီး ဒေသိယစကား ဖြစ်သည်။ ရှိုဘာသာစကားတွင် ထင်ရှားသော ဒေသိယစကား လေးမျိုးရှိနိုင်ပြီး ယင်းတို့မှာ အရှို၊ ဘွာလ်ခွာ၊ ချင်းပုံ (ဥုပ်ပူး) နှင့် Shendu တို့ ဖြစ်သည်။
ချင်းပုံဘာသာစကား ကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ အောက်ပါမြို့နယ်များတွင် ပြောဆိုကြသည်။
ချင်းပြည်နယ်: ကန်ပက်လက်မြို့နယ် နှင့် ပလက်ဝမြို့နယ်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး: ဆောမြို့နယ် နှင့် စေတုတ္တရာမြို့နယ်
အရှိုချင်းဘာသာစကား ကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် ပြောဆိုကြသည်။
VanBik (2009:38) တွင် အောက်ပါ အရှိုစကားများကို စာရင်းပြုစုထားသည်။
Settu (စစ်တွေ မှ သံတွဲအကြား၊ အထူးသဖြင့် စစ်တွေမှ အမ်း အကြားတွင် ပြောဆိုကြသည်)
လိုင်းတူ (စေတုတ္တရာမြို့နယ်တွင် ပြောဆိုကြသည်)
Awttu (မင်းတုန်းမြို့နယ်တွင် ပြောဆိုကြသည်)
Kowntu (ငဖဲ၊ မင်းလှနှင့် မင်းဘူးမြို့နယ်တို့တွင် ပြောဆိုကြသည်)
Kaitu (ပဲခူး၊ မန္တလေးနှင့် မကွေး စသည်တို့တွင် ပြောဆိုကြသည်)
Lauku (ကျောက်ဖြူ၊ အမ်း တို့တွင် ပြောဆိုကြသည်)
ဘွာလ်ခွာဘာသာစကား ကို ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့နယ်၊ ဖလမ်းမြို့ မြောက်ပိုင်းရှိ ဘွာလ်ခွာ၊ ဖိုင်ဇောက် နှင့် Khuang ရွာများတွင် ပြောဆိုကြသည်။
Shendu ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တွင် ပြောဆိုကြသည်။
အရှိုစကားတွင် ဗျည်းသံ ၂၈ ခုနှင့် သရ ၇ ခု ရှိသည်။
အခြားသော ကူကီးဘာသာစကားများကဲ့သို့ပင် အရှိုကြိယာများတွင် ကွဲပြားသော ပုဒ်ရင်း နှစ်ခု ရှိသည်။ This stem alternation isaProto-Kukish feature, which has been retained to different degrees in different Kukish languages.
↑ ချင်းပုံချင်း at Ethnologue (18th ed., 2015)
အရှိုချင်း at Ethnologue (18th ed., 2015)
ဘွာလ်ခွာချင်း at Ethnologue (18th ed., 2015)
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "ဘွာလ်ခွာချင်း"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "ချင်းပုံချင်း"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "အရှိုချင်း"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Shendu"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ 2014-063 | ISO 639-3။ 12 May 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2014-062 | ISO 639-3။ 12 May 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ VanBik, Kenneth. 2009. Proto-Kuki-Chin: A Reconstructed Ancestor of the Kuki-Chin Languages. STEDT Monograph 8. ISBN 0-944613-47-0.
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 26 May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Mruic (မြို(မရူစာ), အနု-ခေါင်စို)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှိုဘာသာစကား&oldid=660497" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၂၃:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။